LandViewer - Hadda isbeddelada isbeddelka waxay ka shaqeeyaan shabakada - Geofumadas
Isticmaalka ugu muhiimsan ee macluumaadka fog ee xogta ayaa ah isbarbardhigga sawirrada meel gaar ah, oo la qaaday waqtiyo kala duwan si loo ogaado isbeddelada dhacay halkan. Iyadoo tiro badan oo sawirada dayax-gacmeedka ah ay hadda isticmaalaan furan, muddo dheer, hagaajinta buuga wax-ka-beddelka waxay qaadanaysaa waqti dheer waxayna u badan tahay inay noqoto mid aan habooneyn. Falanqaynta Xogta EOS waxay abuurtay qalabka is-gaddiska ah ogaanshaha isbedelka ee alaab-beereedka, LandViewer, oo ka mid ah aaladaha ugu awoodda badan ee qalabka raadinta iyo falanqaynta sawirrada dayax-gacmeedka ee suuqa hadda.
Si ka duwan siyaabaha looga hadlo shabakadaha neerfaha aqoonsiga isbedelka ee sifooyinka hore loo soo saaray, isbedelka algorithm lagu ogaanayo EOS USA istaraatijiyad ku salaysan pixels, taas oo macnaheedu yahay in isbedel u dhaxaysa laba images raster multiband, waxaa xisaab ahaan xisaabiyaa by kalagoynta qiimaha pixel ee taariikhda a la qiyamka pixel ah wadataa isku mid ah taariikhda kale. Tani feature cusub saxiixa, waxaa loogu talagalay in qalabayn ogaado isbedel hawsha iyo bixiyaan natiijada sax ah la talaabooyin yar iyo tiro yar oo markii la ArcGIS, QGIS ama kale software GIS processing image marka la barbar dhigo.
Isku xirka isbedelka isbedelka. Sawirada xeebta magaalada Beirut ayaa la doortay si loo ogaado horumarka sanadihii la soo dhaafay.
Soo ogaanshaha isbedelka magaalada Beyrut
Waxyaabaha aan xadidneyn ee codsiyada: laga bilaabo beeraha ilaa kormeerka deegaanka.
Mid ka mid ah ujeedooyinkii ugu muhiimsanaa ee ay aasaaseen kooxda EOS waxay ahayd inay sameeyaan habka isbeddelka isbeddelka isgaarsiinta ee xogta fog fog ee xogta la heli karo iyo sahlan oo loogu talagalay dadka aan la isticmaalin ee ka jira warshado aan GIS ahayn. Iyadoo LandViewer badalaysa qalabka lagu ogaanayo, beeralayda waxay si dhakhso ah u aqoonsan karaan aagagga ay waxyeelo ku gaartay beertooda, roobab, duufaan ama daadad. Maaraynta kaynta, ogaanshaha isbedelka sawirka dayax-gacmeedka, waxay faa'iido u noqon doontaa qiyaasidda aagagga gubtay, ka dib dabka kaynta ka dib, iyo in la ogaado qorista sharci-darrada ah ama duullaanka dhulalka kaynta. La soco marka ay heerka iyo xadka isbedelka cimilada (sida xaabo uu baraf kala horjeeda, wasakhaynta hawada iyo biyaha, luminta degaanka dabiiciga ah ay sabab u tahay Firirsanaan reer magaalka) waa hawl sameeyaa by saynisyahano deegaanka iyo si joogto ah, oo hadda ku sameyn karaan oo ah arrimo dhowr ah. Iyadoo la baranayo farqiga u dhexeeya wakhtigii hore iyo imika iyadoo la isticmaalayo sannado xogta dayax-gacmeedka ah ee LandViewer badalida qalabka lagu ogaanayo, dhammaan warshadahaasi waxay sidoo kale saari karaan isbeddel mustaqbalka ah.
Kiisaska isticmaalka ugu weyn ee lagu ogaanayo isbeddelada: dhaawaca daadadka iyo dhirbaaxada
Sawir waa qiimo gaaraya kun oo eray, iyo awoodda ogaanshaha awoodda isbeddelka sawirada dayax-gacmeedka LandViewer Waxay si fiican u muujin karaan tusaalooyinka nolosha dhabta ah.
Kaymaha weli dabooli oo ku saabsan mid ka mid saddexaad ee aagga caalamka waxaa baaba 'heer warwar leh, inta badan sabab u ah hawlaha aadanaha sida beeraha, macdanta, daaqa xoolaha, dhul beereedka iyo arrimaha dabiiciga ah sida dabka kaynta. Halkii fulinta waxbarashada weyn dhulka kun oo acres of kaynta, farsamo kaynta ku yaal oo si joogto ah ula socdaan kartaa ammaanka kaymaha leh labo ka mid ah images satellite iyo isbedelka si toos ah ogaanshaha ku salaysan NDVI (Daaqsinka Index Duwanaanshaha) .
Sidee u shaqeysaa? NDVI waa hab la yaqaan si loo ogaado caafimaadka Dhirta. By is barbar photo satellite kaynta dhawrsan, iyadoo image la helay oo kaliya ka dib markii geedo ah ayaa la gooyaa, LandViewer ogaado isbeddelada iyo dhalin image farqi muujinayo qodobada jaridda, users soo bixi kartaa natiijada in .jpg, .png ama format .tiff. cover Forest waaqsado yeelan doonaan qiimaha wanaagsan, halka meelaha ka bariyeelay waxay yeelan doonaan xun oo soo bandhigay cas ayaa tilmaamaya in uu jiro joogo Dhirta lahayn.
Muuqaal kale oo muujinaya xaddiga dhirbaaxada ee Madagascar inta u dhaxaysa 2016 iyo 2018; oo laga soo qaatay laba sawirro satellite-ka ah Sentinel-2
Kiis kale oo loo isticmaalo si loo ogaado isbeddelka isbeddelka ayaa ah qiimeynta waxyeellada daadadka beeraha, taas oo daneyn weyn u leh beeraleyda iyo shirkadaha caymiska. Mar kasta oo ay daadadku qaadaan khasaare culus xilligooda goos goosashada, dhaawaca ayaa si dhaqso ah loogu qiyaasaa iyadoo la adeegsanayo gargaarka NDVI ee ku salaysan isbedelka algorithms.
Natiijooyinka goobta Sentinel-2 ee isbeddelka isbeddelka: goobaha guduudan iyo liinta ayaa ka dhigan qaybta daadadka ee beerta; beeraha ku hareeraysan waa cagaar, taasoo macnaheedu yahay inay ka fogaadaan waxyeelada. Daadadka California, Febraayo 2017.
Sida loo sameeyo ogaanshaha isbeddelka ee LandViewer
Waxaa jira laba dariiqo oo lagu bilaabi karo aaladda oo lagu bilaabayo in lagu kala duwanaado sawirada dayax gacmeedka multitemporal: adoo gujinaya batoonka menu midig ee "Qalabka Falanqaynta" ama isbarbardhiga isbarbardhiga, midba midka ku habboon. Waqtiga xaadirka, ogaashada isbedelka waxaa lagu sameeyaa kaliya xogta dayax gacmeedka; Ku darista algorithms-ka ee loogu talagalay xogta firfircoon ee durugsan ayaa loo qorsheeyay cusboonaysiinta mustaqbalka.
Wixii tafaasiil dheeraad ah, akhri tilmaan-bixiyahan bedelida qalabka ogaanshaha ee LandViewer. O bilaabaan si ay u sahamiyaan awooda ugu dambeeyay LandViewer adiga keligaa
Post Previous«Previous Free koorsada AutoCAD - online
Post Next News of HEXAGON 2019Next »